Uhlu lwe-imeyili labafuna Amathuba Ebhizinisi | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili lwabafuna Amathuba
Ngokuqhuma okungapheli nomjikelezo wokuqothuka kombukiso wokuhlala kwabantu baseMelika, kuzoba njalo abantu abaphethe ngokuthi banokuningi futhi badinga ukushaya ngaphandle komunye umuntu, bezama ukuzisebenzela. Lababantu, baziwa njengabathengi bezicabha ezivulekile noma ngokuyisisekelo ithuba eliholayo balangazelela imicabango futhi baguqule izinhlangano ezisemqoka abangaboshelwa ngazo ukuze benze ukuchuma kwabo.
Thola Ukuholela Okudingayo
Sizokwenza kube lula ngawe ukuthola Ukukhangisa kwenethiwekhi okudingayo ukuze ukwazi ukutshala amandla akho ukuthuthukisa ibhizinisi lakho ekuphumeleleni okudingayo. Ziqongeleleni izinqwaba zesikhathi nemali ngokhetho lwethu Olunye lweBhizinisi Lethuba Lokuhola Amathuba namuhla ukuze niqale ukugxila emakethe yenu ngokushesha kwezikhathi zesikhathi semvume! Vele sifike kithi njengamanje ukuqala. Elula!
Abafuna Amathuba Ebhizinisi - Ingabe Ungomunye?
Abafuna Amathuba Ebhizinisi ngabantu abazimisele ukuthola ukuthi bangazuza kanjani ekhaya. Bangabantu abafuna leli thuba elihle kakhulu lebhizinisi elizobenza bakwazi ukubeka iningi lamandla abo ekwenzeni noma yiliphi ibhizinisi abahlanganyela kulo elithela izithelo kulowo nalowo msebenzi. Kunamandla kangakanani lokho?!
Sinezintengo ezihamba phambili nezicatshangelwe kakhulu
Zama ukunganikeli izindleko zethu eziphansi ithuba lokukukhohlisa. Ngoba besidinga ukunikela ngezindleko ezinengqondo kumakhasimende ethu akusho ukuthi Uhlu lwethu lokuhola alunalutho ngaphandle kokuhola lekhwalithi ephezulu. Ungahle ubone izinhlangano ezahlukahlukene ezihlinzeka ngohlu oluqhathaniswa lwemali ethe xaxa futhi ukholelwa ukuthi kufanele zibe nohlu oluphezulu. Lungiselela ukuba ingqondo yakho ishaye. Abazi! Simane nje sikwazi ukukunika amandla ngokweqiniso ukuthola noma yibaphi Abafuna Amathuba webhizinisi abangakusiza ngebhizinisi lakho elithile. Ngabe ikhona imibuzo? Silapha wena! Xhumana nathi namuhla ukuze uthole impendulo yomuntu ngamunye kunoma imiphi imibuzo ongaba nayo ngathi.
Izindleko ezinhle kakhulu ezitholakalayo
Iphatha ama-reps anendaba nezidingo zakho
Ibhizinisi ngalinye lizimisele ekwamukeleni Amathuba amakhulu okuholela njengoba kuholela ekuthuthukisweni kwenhlangano. Thatha izinyathelo ezidingekayo zokuthuthukisa inhlangano yakho namuhla ngokukhetha ingxenye yohlu lwethu olubanzi lwe-lead elizolunga nezidingo zebhizinisi lakho elithile.
Ukuqala Ibhizinisi Lakho Esekelwe Ekhaya
Ukuzindla ushiya indawo yakho yomsebenzi bese uqala owakho ibhizinisi elinomusa endaweni yakho? Kuyamangalisa! Ukuzindla ukuthi uzosondela kanjani ekulweni nalo msebenzi omkhulu kangaka? Hhayi-ke, lokho kungumbala ongaphezu kobunzima, akunjalo? Ungathatha ukulawula kwempilo yakho namuhla bese uqala ukuthatha izinyathelo ezidingekayo zokwenza lesi sibusiso esivela ezulwini, noma ungaqhubeka ucabange, kukuwe. Ngokwethuba lokuthi uthathe izintambo zokulawula, zinikeze ithuba lokukhetha uLunye lwezinhlu zethu eziningi ukuze ukwazi ukuqala ukuxhumana nabantu abangakunikeza amandla ukufeza izinhloso zakho.
Senza Okusemandleni Ethu
Silapha kwa-ListGuy sizama njalo ukwenza konke esikufisa ngokuphelele mayelana nokunikeza amaklayenti ethu ingxenye ye-lead ebaluleke kakhulu eqinisekile ezothuthukisa ibhizinisi labo. Siphinde futhi sibheke ngokuthembekile izindlela ezintsha esingabhekisa kuzo abantu abazimisele kulokho okuletha etafuleni labo.
Siza Ibhizinisi Lakho Likhule
Siza ibhizinisi lakho ukuthuthuka ngokuthola amadrayivu webhizinisi owadingayo namuhla. Iningi lamathuba wethu eliholayo liqhamuka emithonjeni eyiqiniso ngakho-ke uyaqaphela ukuthi wonke umuntu orekhodwe kuLuhlu lwethu udinga ukuthola isaziso kuwe. Xhumana nathi njengamanje ukufaka isicelo sakho.
Ukuphikiswa Kwebhizinisi Kuholela
Ibhizinisi Eliphikisayo Lizoba yimidlalo eshaywayo esiyibambile lapho abantu bezenzela ukwakheka kwezindawo ezahlukahlukene zokuhola ezizimele. Lokhu kusho ukuthi laba ngabantu ababheke ukuthola ukuthi imiphi iminyango evulekile yebhizinisi etholakalayo, empeleni okudingayo, akunjalo? Umholi ngamunye ojoyina uvumile ukunika igama labo, ikheli le-imeyili, indawo yokuhlala nenombolo yocingo. Akutholakali okufunwa okungaphansi kwalokhu, ngakho-ke ulengiselwe ini? Sishayele ngalesi sikhathi ukuze uqale ukwenza ukuthintana kuthintane nenqubekela phambili yakho.
Kuholela Ukuphikiswa Kwebhizinisi = Ukuholela Ebhizinisini Lasekhaya
Vele abantu abajoyine ikhasi lokuhola langempela bazokhonjiswa kuLists lwethu njengethemba. Lawa makhasimende asazofika angabantu abanentshiseko yokuthola okuningana ngezinhlangano zasekhaya ngakho-ke bakulungele ukuba uthintane nabo. Banikeze iningi lemininingwane yabo eyisisekelo yokuxhumana, esiyithathile futhi sayiqongelela emikhakheni ehlukahlukene ebalulekile ye-Biz Opp lead. Sishayele namhlanje emcimbini wokuthi unemibuzo.
I-Biz yethu ephikisayo i-Yamanje
Siyaqhubeka njalo siqinisekisa ukuthi iningi le-Biz yethu eholayo i-akhona akhona njengoba angakwazi ukuba nomgomo wokuthi Uhlu lwakho ngokuthembekile luqukethe idatha yesimo-sethemba onethemba lokuyithola. Lokhu kusho ukuthi kufanele sigxile kukho konke ukuthuthuka okwenzeka emhlabeni webhizinisi, ngokwesibonelo, ukuthuthukiswa okusha kwemishini, ukukunikeza okungcono kakhulu ekilasini ledatha ye-lead.
Ukuhola kuyindlela ebiza kakhulu
Naphezu kweqiniso lokuthi ungazivelisa ibhizinisi ushayela ngokwakho ngokwenza obala noma ukuhlunga izikhathi zesikhathi esilinganiselwe, ukuthenga kwakho okuholayo kuzoba iqhinga elisebenzayo impela. Ngempela, sibeka okukhulu ukuzikhandla ekugcineni izindleko zethu ziphansi njengoba bekungaba ukuhlakanipha ukuze sikwazi ukudlulisela lezi zimali ezigciniwe kuwe. Ngokuyisisekelo, senza okungaphezu kwalokho okumele sikwenze njengawe, ikhasimende lethu, liyajabula. Ngethuba elifanele lokuthi unemibuzo mayelana nokuholela kwethu okumnandi, qiniseka ukuthi uthintana nathi manje ukuze sikukhuthaze. Ngokushesha lapho uqala, ngokushesha ungaqala ukusebenzela ibhizinisi lakho! Yini enye, akusikho yini lokho ukuthi kumayelana nani?
Ukuze uhlale ugxile emakethe evame ukuguqula uzodinga ukuxhuma futhi ubonise ngokubonakalayo kunoma yimaphi amaklayenti wakho ahleliwe. Lapha lapha ku-ListGuy sidinga ukukunika amandla ukuthola lawo makhasimende azayo ngakho-ke sikwenzile inhloso ukukunikeza ingxenye yamadivayisi amangalisa kakhulu adingekayo ukuze uzuze embonini ethuthukisayo engacabangeki. Sinezobuchwepheshe ekunikezeni ngohlu lwamanje lweBiz Opp ukuze ungaqala ukuxhumana neningi lamaklayenti akho ahlelekile bese uqala ukwenza ibhizinisi olidingayo.